Maxay muhiim ah in aad tirtirto taariikhda ku iPhone?
Takhalusid taariikhda aad iPhone waa muhiim haddii aad tahay qof si dhab ah dan ku saabsan arimahaaga gaarka ah. Haddii aad tahay nooca in dadka siinaysaa aad iPhone inta badan, mana doonayo in iyaga si aad u aragto taariikhda aad isticmaalka, ka dibna la tirtiro taariikhda aad iPhone waa in ka sii muhiimsan in aad. Sabab kale waxay noqon kartaa, haddii aad rabto in aad iibiso iPhone ama u bixin ama waxaa laga yaabaa in ugu deeqay qof, ka dibna sida ugu fiican ee aad u doonayo inuu u cadeeyo oo dhan taariikhda aad iPhone si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah ama kaliya in ay soo daataan xogta aad iPhone.
Mid ka mid ah click taariikhda browser cad iyo taariikh kale oo ku saabsan iPhone
Xitaa haddii aad si buuxda u masixi taariikhda browser ama taariikh kale oo aad iPhone, waxaa weli jira raad waxaa ka mid ah in la soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo software qaarkood. Noocyadaas of software qoto dheer-raadin doonaa iPhone iyo kabsado xogta lumay. Habka ugu fiican ee gebi ahaanba cad taariikhda browser iyo taariikh kale oo aad iPhone waa in la isticmaalo SafeEraser Wondershare halkii. Wondershare SafeEraser waa tiro ka mid ah qalab ilaalinta gaarka ah ee aad iPhone iyo qalabka kale ee macruufka ah. Waa qalab weyn si loo tirtiro wax walba oo ka iPhone iyo qalabka kale ee macruufka iyadoo hal click. Waxa ay taageertaa xogta user kasta oo ku saabsan qalabka ka soo xiriiro, fariimaha, sawiro, videos, barnaamijyadooda, warsan info, sirta iyo xogta shakhsiga kale ku kaydsan qalab aad, oo Waa ay ku cawinaysa in gabi ahaanba tirtiro xogta ku saabsan qalabka macruufka ah si looga hortago tuugada aqoonsiga marka qalab aad iibiso ama Deeqda. Ka dib markii la isticmaalayo Wondershare SafeEraser in masixi xogta aad on your iPhone, ma software kale ama technology awood u yeelan doonaan inay ka soo kabsadaan xogta la tirtiro. Waxay ka dhigaysa mid aad u dhaqanto sida iPhone, haddii ay tahay calaamad cusub.
Easy in ay isticmaalaan interface: Samee aan doonaya gargaar xirfadeed.
Dardar qalab aad: dadajiso qalab aad u qaab ciyaareed ugu badnaan.
Si joogto ah u tirtirto xogta: Delete xogta aad iyo doonaa marnaba aan loo eegayn waxa software waxaa loo isticmaalaa in lagu soo kabsaday.
Dhammaan xogta user taageeray: masixi nooc kasta oo xog user sida xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, barnaamijyadooda, warsan info, sirta ah iyo in ka badan.
Ilaalinta fiican xogta aad: Ilaali files shakhsi.
Hawadda sawir Wanaagsan: Yaree tirada sawir si ay u siiyaan qalab aad meel dheeraad ah weli lagu hayo tayada sida asalka ah.
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser in ay nadiifiso taariikhda oo dhan aad iPhone
Waxaa jira taariikh kala duwan laga heli karaa iPhone. Oo ah kuwa ugu waaweyn ee jira taariikhda browser, wac taariikhda iyo fariimaha. Marka laga nooca taariikhda, Wondershare SafeEraser tirtiro oo dhan oo iyaga ka mid aan ka tagin wax raad kasta.
Delete taariikhda browser la SafeEraser Wondershare
Talaabada 1: Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare adigoo gujinaya links ee kor ku xusan.
Talaabada 2: Isku aad iPhone iyo Wondershare codsiga SafeEraser bilowdo.
Talaabada 3: Riix ah "masixi Private Data" ka mid ah fursadaha ugu muhiimsan ee suuqa kala SafeEraser.
Talaabada 4: Sug SafeEraser Wondershare in ay si toos ah u falanqeeyaan iyo iskaan joogo xog ku saabsan qalab aad ka.
Talaabada 5: Ka dib markii raajo la dhammeeyo, xogta gaarka kuu ah la soo daabici doonaa dhanka bidix ee suuqa kala SafeEraser ah oo qaybo. Hubi "Safari History", sanduuqyada "Safari Cache" iyo "Safari Cookies" iyo riix "masixi Hadda" badhanka hoose ee suuqa kala si joogto ah u tirtirto taariikhda wac aad. The "Safari Cache" iyo "Safari Cookies" dukaamada sirta ah iyo macluumaadka kale ee gaarka ah oo sidaas daraaddeed iyaga tirtiro waa muhiim sidoo kale.
Talaabada 6: In uu furmo suuqa soo socda, waxaa laguu keenay in doonaa inay ku qor erayga "tirtirto" si joogto ah u tirtirto xogta la doortay ka iPhone. Nooca tirtirto iyo riix "masixi Hadda" badhanka si joogto ah u tirtirto oo si buuxda u masixi taariikhda wac aad.
Ka dib taariikhda browser ayaa la tirtiray, waxaad ka heli doontaa ah "guul tirtirayaa" Fariinta sida arkay sawirka hoos ku qoran.
Si aad u masixi taariikh kale sida taariikhda wac, fariimaha, iwm, si fudud u dooro tab taariikhda wac ama fariimaha tab ee dhinaca bidix ee suuqa kala halkii Safari taariikhda wakhtigan iyo riix badhanka masixi si ay u masixi.
Ka dib taariikhda uu si guul leh loo tirtiro, waxaa si joogto ah la tirtirayaa aad telefoon oo aan marnaba la soo kabsaday karo.
Masixi Xogta gaarka ah ee iPhone Video Tutorial
> Resource > masixi > Sida loo Delete History on iPhone